भिम राबललाई लाग्यो हाइभोल्टेजको झड्का , आज फेरि यो पद बाट पनि हटाईयो ! – GALAXY
भिम राबललाई लाग्यो हाइभोल्टेजको झड्का , आज फेरि यो पद बाट पनि हटाईयो !
काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन सुरु भएको छ । विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओलीसहित सात सदस्यीय अध्यक्षमण्डल गठन गरेको छ तर भीम रावललाई नसमेटिएको हो ।
युवराज ज्ञवाली र अष्ठलक्ष्मी शाक्य समेटिएका छन् भने स्थायी कमिटी सदस्यहरु सत्यनारायण मण्डल, छविलाल विश्वकर्मा समेटिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर आएपछि स्थायी कमिटी सदस्य बनाइएका रामबहादुर थापा पनि समेटिएका छन् । तर, उपाध्यक्ष भीम रावल भने अध्यक्ष मण्डलमा समेटिएका छैनन् ।
माधव नेपाल समूह छोडेर एमालेमा बसेपछि १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने, पार्टीलाई २०७५ साल जेठ दुई कै परिस्थितबाट अघि बढाउनुपर्ने र आफूले पाएको पुरानो जिम्मेवारी सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी फिर्ता हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
तर, अध्यक्ष ओलीले भने आफूले लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइसकेको भन्दै उनको जिम्मेवारी फिर्ता नहुने बताएका छन् । अधिवेशनको लोगोसमेत सार्वजनिक गरेका हुन् । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा अध्यक्ष मण्डलको समेत घोषणा गरिएको छ।
माधव नेपालको टिम छोडर एमालेका बसेका १० स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई अघिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकले गठन गरेका समूहहरुमा पनि नेतृत्व दिइएको थिएन ।